October 13, 2020 - Achawlaymyar
“ဖားကန့်က မြေပြိုခဲ့တဲ့နေရာမှာ နှစ်တန်နီးပါးရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး တွေ့ရှိ”
October 13, 2020 by Achawlaymyar
အောက်တိုဘာ-၁၃-၂၀၂၀ ဇော်မိုးထက်(VOM ) ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ ဆိပ်မူအုပ်စု၊ ဝှေခါကျေးရွာအနီးက ကျောက်စိမ်းလုပ်ကွက်ဟောင်းအတွင်းမှာ အလေးချိန်တစ်တန်ကျော်ရှိတဲ့ ကျောက်စိမ်းတုံး တစ်တုံးကို မနေ့ အောက်တိုဘာ ၁၂ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက တွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ဝှေခါကျေးရွာ ဒေသခံတွေဆီကနေ သိရပါတယ် ။ အဲ့ဒီကျောက်စိမ်းတုံးကို တပိုင်တနိုင်ကျောက်စိမ်းတူးဖော်နေတဲ့ ရေမဆေးသမားတွေက တွေ့ရှိခဲ့တာလို့ သိရပြီး စတင်တွေ့ရှိတဲ့ ရေမဆေးသမားတွေဟာ ကျောက်စိမ်းမျိုးနွယ် မဟုတ်ဘဲ သာမန်ကျောက်တုံးဖြစ်နေတာကြောင့် မယူပဲထားခဲ့တယ်လို့ ရေမဆေးသမားတွေက ပြောပါတယ်။ ဝှေခါကျေးရွာတာဝန်ခံ ဦးကျော်မင်းကတော့ ” ကျောက်စိမ်းမဟုတ်ဘူးဗျ ။ အလေးချိန်ကတော့ ပိဿာချိန် ရှစ်ရာလောက်တော့ရှိမယ် ။ တပ်နဲ့ ရဲကတော့ လုံခြုံရေးယူထားတယ် “လို့ပြောပါတယ်။ ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့နေရာဟာ ဇူလိုင်လ ၂ရက် နေ့မနက်ပိုင်းက လုပ်ကွက် ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့် တပိုင်တနိုင်ကျောက်တူးသူ ရေမဆေးလုပ်သားပေါင်း … Read more
အလှအပ အတွက် စံပါယ်ပန်း၏ အကျိုးပြုပုံ….
ခေါင်းမှာဗောက်တွေရှိလို့စိတ်ညစ်နေခဲ့ ရတာနှစ်တွေချီနေခဲ့တာကြာပေါ့ အင်္ဂလိပ်ဆေး ဗမာဆေးစုံလို့ တစ်ရက်က သောက်နေကြငါးကြီးဆီကို ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး သွားကြားထိုးတံနဲ့ဖောက်ပြီးခေါင်းမလျှော်ခင် ၁ -၂ နာရီလောက်လိမ်းထားပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက် တာခုဗောက်တွေမထတော့ဘူး ဝမ်းသာလိုက်တာ ဆိုတာလေ တစ်ခါတစ်လေ တစ်ဇောင်းလက်ပက် အနှစ်ထဲကိုငါးကြီးဆီဖောက်ထည့်ပြီးရောလိမ်းထား လိုက်တယ် ပြီးမှခေါင်းလျှော်လိုက်တာ ဗောက်ပျောက်ချင်တဲ့သူများလုပ်ကြည့်ပါ ကိုယ်တွေ့လုပ်နေတာမို့ပါ အဆင်ပြေတယ် Zawgyi, ေခါင္းမွာေဗာက္ေတြရွိလို႔စိတ္ညစ္ေနခဲ့ ရတာႏွစ္ေတြခ်ီေနခဲ့တာၾကာေပါ့ အဂၤလိပ္ေဆး ဗမာေဆးစုံလို႔ တစ္ရက္က ေသာက္ေနၾကငါးႀကီးဆီကို ဘာရယ္မဟုတ္ဘူး သြားၾကားထိုးတံနဲ႔ေဖာက္ၿပီးေခါင္းမေလွ်ာ္ခင္ ၁ -၂ နာရီေလာက္လိမ္းထားၿပီးမွေခါင္းေလွ်ာ္လိုက္ တာခုေဗာက္ေတြမထေတာ့ဘူး ဝမ္းသာလိုက္တာ ဆိုတာေလ တစ္ခါတစ္ေလ တစ္ေဇာင္းလက္ပက္ အႏွစ္ထဲကိုငါးႀကီးဆီေဖာက္ထည့္ၿပီးေရာလိမ္းထား လိုက္တယ္ ၿပီးမွေခါင္းေလွ်ာ္လိုက္တာ ေဗာက္ေပ်ာက္ခ်င္တဲ့သူမ်ားလုပ္ၾကည့္ပါ ကိုယ္ေတြ႕လုပ္ေနတာမို႔ပါ အဆင္ေျပတယ္
ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို အျမန္ဆုံးသက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္း (၁၀) ခု…..
ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို အျမန္ဆုံးသက္သာေစမယ့္ နည္းလမ္း (၁၀) ခု အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီး လူဦးေရရဲ႕ တစ္ဝက္နီးပါးေလာက္က တစ္ႏွစ္ကို အနည္းဆုံး တစ္ခါေလာက္ ေခါင္းကိုက္တယ္လို႔ ေလ့လာမႈေတြက ေျပာပါတယ္။ ေခါင္းတစ္ျခမ္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းတစ္ခုလုံး ကိုက္ျခင္းဆိုၿပီး ေခါင္းကိုက္ပုံကိုက္နည္းေတြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ စိတ္ညစ္စရာေတြေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တတ္သလို မ်က္စိအျမင္အာ႐ုံမွာ ျပႆနာျဖစ္လို႔လည္း ေခါင္းကိုက္ပါတယ္။ စိတ္ညစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေခါင္းကိုက္တဲ့လူေပါင္း 1.6 သန္းခန႔္ ရွိပါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာမဆို ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့၊ ျမန္ဆန္တဲ့ ေခါင္းကိုက္ေပ်ာက္ ေလ့က်င့္ခန္းေလးေတြ ရွိပါတယ္။ 1. အပူခ်ိန္ကုထုံး ေရေႏြးနဲ႔ ေရခ်ိဳးျခင္းက တင္းေနတဲ့ ႂကြက္သားေတြကို ေျပေလ်ာ့ေစၿပီး ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေရကို အၾကာႀကီးေတာ့ မခ်ိဳးသင့္ပါဘူး။ 2. ရနံ႔ကုထုံး လာဗင္ဒါပန္းရနံ႔ဆီက ေခါင္းကိုက္ျခင္းကို သက္သာေစပါတယ္။ … Read more
တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူများအတွက် တစ်သက်တာ ဟောစာတမ်း
တန်ဆောင်မုန်းလအတွင်းမွေးဖွားသူများသည် သစ္စာတရားဦးထိပ်ပန်ဆင်သူများ ဖြစ်ကြမယ်ဖြောင့်မတ်သော စိတ်ထားရှိတတ်ကြတယ်။ စိတ်၌ ခံစားချက်ဒဏ်ရာများဖြင့် ပြည့်နှက်နေတတ်တယ်ကိုယ်တိုင်အပင်ပန်းခံ ရုန်းကန်ရခြင်းများလည်း များစွာရှိ၏။ ဘဝအစတွင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမယ်ခက်ခဲသည်ဆိုရာတွင်မောင်နှမသားချင်းအတူတူမှာပင် ကိုယ်က ပိုပြီး ခက်ခဲပင်ပန်းမယ်။အနစ်နာခံကြိုးစားရမယ်။ သို့သော်အဖက်ဖက်မှအခက်အခဲများကိုဇွဲနှင့်စွဲမြဲစွာ လုပ်ကိုင်ကြိုးစားရင်း သာမန်ထက်ပိုအောင်မြင်မည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူတို့သည်ဘဝတွင်မိမိအပေါ်နားလည်ပေးသူနည်းတတ်တယ်။တစ်ကိုယ်တည်းကျိတ်ပြီးခံစားရသောဒဏ်ချက်များတို့ကို ပြင်းထန်စွာ ခံစားရင်း အငြိုးအတေးစိတ်များထွက်ပေါ်လာရတယ် မိမိအပေါ် လွှမ်းမိုးခြင်းကိုလုံးဝလက်မခံနိုင် သို့သော်သူတို့ဘဝတွင်အဘွားအမေ၊အစ်မ၊အဒေါ်စသောအမျိုးသမီးကြီးတို့၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို (ကောင်းသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသောသဘောဖြင့်ဖြစ်စေ)သက်ရောက်မှုရှိနေတတ်တယ်။စိတ်အား၊ လူအားကောင်းတယ် ဘဝတွင်ကြီးမြင့်ထင်ပေါ်ချင်တတ်တယ်။ ဘဝ၏အောင်မြင်မှုကို တိုက်ပွဲပမာ တိုက်ယူလိုကြတယ်။အပင်ပန်းခံပြီးကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသမျှကြိုးစားယူကြမယ်။ဘဝအစတွင်ကျပ်တည်းသလောက်နောက်ဆုံးတွင်အောင်မြင်ကြမယ်။ အချိန်ကိုလည်းစောင့်ဆိုင်းလုပ်ကိုင်တတ်ကြတယ်။ဦးဆောင်နေရာထိပ်ဆုံးသို့ ရည်မှန်း၍ လုပ်တတ်တယ်။စိတ်မြန်ဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်။အချို့ကိစ္စတို့တွင် ငါသိငါတတ်သဘောဖြင့်တဇွတ်ထိုးလုပ်မိတတ်ကြတယ်။အငြင်းလည်းသန်မယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရာကိုခေါင်းမာစွာကိုင်စွဲထားတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပျက်စီးနစ်နာတတ်တယ်ဂရုပြုပါ။ တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူတို့သည် အပြောချို၏။ တစ်ခါတစ်ရံမာနကြီးတတ်၏။စိတ်ထဲမထင်လျှင် ဘယ်လူကြီးလူကောင်းကိုပင်ဖြစ်စေ မခေါ်ဘဲဥပေက္ခာပြုနေနိုင်သူများပါ။ စီးပွားဥစ္စာ ချမ်းသာတတ်တယ်။ရုပ်သန့်ပြီးလူ့သဘာဝကိုသဘောပေါက်ကာပရိယာယ်သဘောများလည်း တတ်ကျွမ်းတယ်။အခြွေအရံများမယ်အဝတ်ကောင်းအစားကောင်းများဝတ်ရမည်။ မိဘနှင့်ဝေးကွာနေရတတ်တယ်။ အချို့ပညာရပ်တို့တွင်တစ်ပိုင်းတစ်စဖြင့်ရပ်ထားရတယ်။တစ်ခါတစ်ရံ မိဘဆရာသမားအကြီးအကဲတို့စကားကိုနားမထောင်ဘဲနေတတ်တယ်။အထက်လူကြီး၊မင်းအစိုးရတို့၏ ချီးမြှင့်မှုကိုခံရကာဘဝတွင်ကြီးပွားအောင်မြင်တတ်ကြပါတယ်။မမြင်အပ်သော မြင့်မြတ်သည့် နာမ်လောကမှပုဂ္ဂိုလ်ထူးတို့၏ ပါရမီပဋ္ဌာန်းဆက်ဖြင့်စောင့်ရှောက်မှုကိုလည်း သိသာစွာခံရတတ်မည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမွေးဖွားသူတို့သည်အသိရခက်အကဲခတ်ရခက်တဲ့သူတွေပါပတ်ဝန်းကျင်အမြင်အရ တစ်မျိုး၊ … Read more
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အေနနဲ႔တစ္ပတ္ကို ေခါင္း ဘယ္ႏွႀကိမ္ ေလွ်ာ္သင့္လဲဆိုရင္ လူတိုင္းမွာ ေမြးရာပါ အသားအေရ အမ်ိဳးအစား မတူညီၾက သကဲ့သို႔ ဆံသားအမ်ိဳး အစားလည္း ကြဲျပားျခား နားၾကပါတယ္ (က) က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဆံသား (ခ) ပုံမွန္(အလယ္အလတ္) ဆံသား (ဂ) ဆံသားအုံေကာင္း (ဆံပင္ထူ) (ဃ) ေျခာက္ေသြ႕ (မြဲေျခာက္ေျခာက္) ဆံသားဆိုၿပီးေတာ့ အေျခခံအားျဖင့္ ဆံသားေလးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အဲဒီလို မတူညီတဲ့ ဆံသားအမ်ိဳး အစားေပၚမူတည္၍၊ ေခါင္းေလွ်ာ္တဲ့ အႀကိမ္ႏႈန္းဟာလည္း အနည္းအမ်ား ကြာဟမႈရွိပါတယ္။ ၁။ က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ ဆံသားပိုင္ရွင္မ်ားအတြက္ က်န္းမာတဲ့ဆံသားေတြက အျခားဆံပင္အမ်ိဳးအစားေတြထက္ ပို၍အဆီစုပ္ယူမႈ အားေကာင္းၾကတာေၾကာင့္ daily use shampoo (ေခၚ) ေန႔စဥ္သုံးရွမ္ပူအမ်ိဳးအစားကို သုံးသင့္ပါတယ္။ တစ္ရက္ျခား(သို႔)တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္ ေခါင္းေလွ်ာ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။(အဆီျပန္တဲ့ဆံပင္ကလည္းက်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ဆံသားအမ်ိဳးအစားထဲမွာပါရွိေနပါတယ္။ အဆီအလြန္ျပန္တဲ့ … Read more
နှစ်နဲ့ချီပြီးတွဲလာတဲ့ ချစ်သူ စုံတွဲတွေ ပြတ်ကုန်တာ ဒီကိစ္စတွေကြောင့်ပါ..…
ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီးတြဲလာတဲ့ ခ်စ္သူ စုံတြဲေတြ ျပတ္ကုန္တာ ဒီကိစၥေတြေၾကာင့္ပဲ… ခ်စ္သူသက္တမ္းၾကာလာရင္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာက ေျပာစရာရွားလာတယ္။ ဒါ ေပါ့ေသးေသး ျပႆနာမဟုတ္ဘူးေနာ္ …။ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး တြဲလာတဲ့ စုံတြဲေတြ ျပတ္ကုန္တာ ဒီကိစၥေၾကာင့္ပဲ ဘာေျပာရမွန္းမသိတာ ေျပာသမွ်ေတြကို အပိုေတြလို႔ ထင္သြားတာ သိပ္အႏၲရယ္ႀကီးပါတယ္ …။ ဥပမာ – ခ်စ္သူျဖစ္ကာစ ဖုန္းေျပာရင္ ဘယ္ႏွစ္နာရီၾကာလည္း ႏွစ္နဲ႔ခ်ီလာေတာ့ မိနစ္ေတြ နည္းသြားတယ္။ လိုရင္းပဲ ေျပာၾကေတာ့တယ္ …။ ေနာက္ပိုင္း ဖုန္းေခၚတာေတာင္ သိပ္မရွိေတာ့ဘူး။ ဒါ မခ်စ္ေတာ့တာလား ဆိုေတာ့လည္း မဟုတ္ဘူး။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္က ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၿပီး တြဲလာတာ ခ်စ္တာေပါ့ …။ ဒါေပမယ့္ ဘာေျပာရမွန္း မသိတာရယ္၊ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ ေနခ်င္တာရယ္၊ ကိုယ္လုပ္ခ်င္တာေလးေတြ လုပ္ခ်င္တာရယ္ေတြနဲ႔ … Read more
ကျန်ခဲ့တဲ့သူနဲ့ ချန်ခဲ့တဲ့သူ ဘယ်သူက ပိုပြီးနာကျင်ရလဲ….
က်န္ခဲ့တဲ့သူနဲ႔ ခ်န္ခဲ့တဲ့သူ ဘယ္သူက ပိုၿပီးနာက်င္ရလဲ ေမးေလ့႐ွိတာေတြေပါ့ …က်န္ခဲ့တဲ့သူနဲ႔ ခ်န္ခဲ့တဲ့သူက ဘယ္သူက ပိုၿပီးနာက်င္ရလဲတဲ့ … မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ က်န္ခဲ့တဲ့သူက ပိုၿပီးနာက်င္ရတတ္တယ္လို႔ ေျဖတတ္ၾကတယ္ ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ က်န္ခဲ့တဲ့သူဆိုတာ မူလေနရာမွာရပ္ရင္းနဲ႔ အမွတ္တရေတြ အမ်ားႀကီးေတြၾကားမွာ ျပန္ျမင္ေယာင္ရတဲ့အခါတိုင္း ျပန္ၿပီးသတိတရနဲ႔ နာက်င္ရတတ္တယ္တဲ့ ။ ခ်န္ခဲ့တဲ့သူက်ေတာ့ ပတ္ဝန္းက်င္အသစ္မွာ အဆင္ေျပဖို႔ႀကိဳးစားရင္းနဲ႔ …သတိရဖို႔အခ်ိန္ေတြ မ႐ွိ ျဖစ္တတ္တယ္လို႔ ထင္တတ္ၾကတယ္ေလ ။ ကြၽန္မက်ေတာ့ အဲ့လိုမေတြးဘူး ။ ခ်န္ခဲ့ျခင္း က်န္ခဲ့ျခင္းေတြထက္ တကယ္တမ္းက်ေတာ့ ပိုခ်စ္တဲ့သူက ပိုၿပီးနာက်င္ရပါတယ္ ။ တစ္ခါတစ္ေလမွာ ခ်န္ခဲ့ရျခင္းမွာ မနီးစပ္ခ်င္လို႔မဟုတ္ပဲ အေျခအေနအရဆိုတဲ့ အရာေတြ႐ွိတယ္ ။ ၿပီးေတာ့ ပိုခ်စ္မိတဲ့သူမွာ .. ပိုၿပီးအမွတ္ထားတတ္တဲ့ စိတ္ေလးက အတိတ္တိုင္းကို တစိုက္မတ္မတ္လြမ္းတတ္တဲ့ စိတ္ေတြ႐ွိတယ္ေလ … Read more
“ကိုဗစ်ပိုးဟာ လေ့လာမှုတွေအရ အရင့်အရင်က တွေးထင်ထားတာထက် အချိန်ပိုကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်…..
Covid ပိုးဟာ လေ့လာမှုတွေအရ အရင့်အရင်က တွေးထင်ထားတာထက် အချိန်ပိုကြာကြာ အသက်ရှင်နိုင်တာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကို ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ လေ့လာခဲ့ရာမှာတော့ မှန်ပြင်၊ စတီးလ်၊ ဘဏ်စာအုပ်၊ စာရွက်နဲ့ အခြားပစ္စည်းပစ္စယ အချို့ရဲ့ မျက်နှာပြင်တွေမှာ အပူချိန် ၂၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးရပ်စ် အခြေအနေမှာဆိုရင် (၂၈)ရက်ထိ အသက်ရှင်သန်နိုင် ကြောင်း ဩစတြေးလျအမျိုးသား သိပ္ပံအေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဗိုင်းရပ်စ်တွေဟာ အေးမြစွတ်ဆိုသော အခြေအနေထက် ပိုပူတဲ့အပူချိန်လို နေရာမျိုးမှာ ပိုပြီးအသက်ရှင်ချိန် တိုတောင်းတာကိုလည်း သုတေသီတွေက တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းမှာ ၄၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးရပ်စ်ရှိတဲ့ မျက်နှာပြင်မျိုးတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်နိုင်မှု ရပ်တန့်ကြောင်းလည်း ပြောပါတယ်။ အရင်တစ်ပတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာထုတ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ဗေဒဂျာနယ်မှာ ဒီလေ့လာမှုကို ရှင်းပြထားပြီး ကိုဗစ်ကူးစက်မှု ရပ်တန့်ရေးဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ ရလဒ်တွေကို သရုပ်ပြထားပါတယ်။ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ … Read more